Exodus 30 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
30 “Afei fa ɔkanto dua yɛ aduhuam muka a wɔbɛhyew aduhuam+ wɔ so. 2 Ma ɛnyɛ ahinanan; ne ntwemu nyɛ basafa biako, na ne tɛtrɛtɛ nso nyɛ basafa biako. Na ne tenten nyɛ basafa abien. Yɛ mmɛn tuatua ho.+ 3 Fa sika amapa yɛ ho nyinaa, ɛso, nkyɛnmu, ne ne mmɛn. Na fa sika di adwini toto ano hyia.+ 4 Afei fa sika kɔkɔɔ yɛ nkawa abien wɔ nkyɛnmu, benkum ne nifa, wɔ adwini no ase, na wɔde nnua ahyehyɛ mu asoa.+ 5 Fa ɔkanto sen nnua no na fa sika dura ho.+ 6 Na fa si ntwamutam a ɛsɛn hɔ no anim wɔ adanse adaka+ no ho. Ma ensi Adanse no mmuaso anim, baabi a meyi me ho adi akyerɛ wo+ no. 7 “Na Aaron bɛhyew+ aduhuam+ wɔ so. Anɔpa biara, bere a ɔrebɛhwɛ akanea+ no, ɔbɛhyew aduhuam no. 8 Na sɛ edu anwummere na Aaron bɛsɔ akanea no a, ɔbɛhyew aduhuam no. Ɛyɛ aduhuam a mobɛhyew daa daa wɔ Yehowa anim, mo awo ntoatoaso nyinaa mu. 9 Monnhyew aduhuam hunu+ biara wɔ so, na mommmɔ ɔhyew afɔre, aduan afɔre, anaa nsã afɔre biara nso wɔ so. 10 Na afe biara, Aaron de aboa a ɔde bɔɔ bɔne ho mpata afɔre no mogya bɛsosɔ mmɛn no so de atew afɔremuka no ho.+ Ɔbɛyɛ saa pɛnkoro afe biara de apata ama afɔremuka no, mo awo ntoatoaso nyinaa mu, efisɛ ɛyɛ akronkronne mu ade kronkron ma Yehowa.” 11 Na Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 12 “Bere biara a wobɛkan Israelfo de ahu wɔn dodow+ no, ɛsɛ sɛ wɔn mu biara tua biribi ma Yehowa de pata ma ne kra+ na asiane biara anto wɔn bere a worekan wɔn no.+ 13 Obiara a wɔbɛkan no biara betua dwetɛbona fã, sɛnea wobu dwetɛbona ano wɔ kronkronbea hɔ.+ Dwetɛbona biara yɛ gerah aduonu. Dwetɛbona fã yi ne ntoboa a wobeyi ama Yehowa.+ 14 Obiara a wadi mfe aduonu anaa nea ɛboro saa a wɔbɛkan no no beyi ntoboa ama Yehowa.+ 15 Ɛnsɛ sɛ osikani tua boro dwetɛbona fã, na ohiani nso nntew so.+ Ɛyɛ ntoboa a mubetua ama Yehowa de apata ama mo kra.+ 16 Na gyigye dwetɛ mpata sika no fi Israelfo no hɔ na fa ma ahyiae ntamadan no ho som,+ na ɛnyɛ nkae wɔ Yehowa anim mma Israelfo, na wɔmfa mpata mma mo kra.” 17 Yehowa san ka kyerɛɛ Mose sɛ: 18 “Fa kɔbere yɛ ɛsɛn na fa bi yɛ ne nnyinaso+ si ahyiae ntamadan no ne afɔremuka no ntam, na fa nsu gu mu+ na wɔde ahohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho. 19 Aaron ne ne mma mfa nhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho.+ 20 Ansa na wɔbɛkɔ ahyiae ntamadan no mu anaa wɔbɛba afɔremuka no ho de ogya abɔ afɔre ama Yehowa+ no, wɔmfa nsu nhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho, na wɔanwuwu. 21 Wɔnhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho na wɔanwuwu.+ Eyi yɛ ahyɛde a ɔne n’asefo bedi so daa wɔn awo ntoatoaso nyinaa mu.”+ 22 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 23 “Hwehwɛ nnuhuam papa:+ kurobow+ momono nnwetɛbona ahanum, anoatre+ saa fã, kyerɛ sɛ nnwetɛbona ahanu aduonum, ne kalamo+ aduhuam nnwetɛbona ahanu aduonum, 24 ne kasia+ aduhuam nnwetɛbona ahanum, sɛnea wobu dwetɛbona ano wɔ kronkronbea+ hɔ, ne ngodua ngo hin+ biako. 25 Fa yɛ ɔsrango kronkron, nnuhuam a ɛyɛ adufrafo nsa ano adwuma.+ Ɛnyɛ ɔsrango kronkron.+ 26 “Fa sra ahyiae ntamadan+ no ne adanse adaka no, 27 ne ɔpon no ne ɛso nneɛma nyinaa, ne kaneadua no ne ɛho nneɛma, ne aduhuam muka, 28 ne afɔremuka a wɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ so ne ɛho nneɛma nyinaa, ne ɛsɛn no ne ne nnyinaso no ho. 29 Tew eyinom nyinaa ho ma ɛnyɛ akronkronne mu ade kronkron.+ Obiara a ɔde ne nsa bɛka no, ɛsɛ sɛ ɔyɛ kronkron.+ 30 Sra Aaron+ ne ne mma+ na wɔnyɛ kronkron na wɔatumi asom sɛ asɔfo wɔ m’anim.+ 31 “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Eyi bɛkɔ so ayɛ me srango kronkron, mo awo ntoatoaso nyinaa mu.+ 32 Ɔdesani biara mmfa nnsra, na monnyɛ ne sɛso biara. Ɛyɛ kronkron, na ɛnkɔ so nyɛ kronkron mma mo. 33 Obiara a ɔbɛyɛ ngo te sɛ eyi de aka onipahunu biara no, wobetwa no afi ne man mu.’”+ 34 Yehowa san ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Hwehwɛ nnuhuam+ yi: stakiti, onika, galbanum, ne ɛhyɛ.+ Susuw ne nyinaa pɛ. 35 Fa ne nyinaa fra yiye na hyɛ no nkyene+ ma ɛnyɛ aduhuam+ kronkron a emu tew, adufrafo nsa ano adwuma. 36 Afei siw bi ma ɛnyɛ muhumuhu na fa bi si Adanse no anim wɔ ahyiae ntamadan+ no mu, baabi a meyi me ho adi akyerɛ wo+ no. Ɛnyɛ akronkronne mu ade kronkron mma mo. 37 Na aduhuam a wobɛyɛ yi de, monhwɛ na obiara anyɛ bi amfa,+ efisɛ ɛyɛ ade kronkron wɔ Yehowa anim.+ 38 Sɛ ne hua nti obi yɛ aduhuam yi bi a, wobetwa+ no afi ne man mu.”